မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကက်သလစ်သမ္မာကျမ်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းတာဝန်လွှဲအပ်ခြင်းသတင်း | Radio Veritas Asia
(5-1-2020) ရက်နေ့ က ရန်ကုန်မြို့ ကက်သလစ် ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကက်သလစ်သမ္မာကျမ်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းတာဝန်လွှဲအပ်ခြင်း အခမ်းအနားတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကက်သလစ်သမ္မာကျမ်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းတွင်(၈)နှစ်နီးပါးတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့သောFr. Bosco Saw Lar Htoo မှ တာဝန်ခံသစ်ဖြစ်သော Fr. George Shwe Htun အားတာဝန်လွှဲအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ သာသနာအသီးသီးမှ တာဝန်ခံဘုန်းတော်ကြီးများစစ္စသာရ်များ သမ္မာကျမ်းစာ တမန်တော်လုပ်ငန်းတွင်ဆက်ကပ်လုပ်ဆောင်နေကြသောသာသနာအသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသမ္မာကျမ်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းနာယက ဆရာတော်ကြီး Basilio Athaiဦးဆောင်ပြီး မစ္ဆားတရားပူဇော်ခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့ပါတယ်။
ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးBasilioAthaiအမှာစကားပြောကြားရာ၌(၈)နှစ်နီးပါးတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်Fr.Bosco အားလုက်ဆောင်ခဲ့သမျှကို မှတ်တမ်းတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ၊ဆရာတော်အနေဖြင့် မယ်မယ်ရ ရကူညီ ပံံ့ပိုးခဲ့ ရခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အရမ်းကိုဝမ်းနည်းကြောင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာသမားဟာ အမြဲတမ်း သမ္မာကျမ်းစာနဲ ့ကင်းလို့တော့မရဘူး ၊ဘယ်နေရာဘဲရောက်ရောက်သမ္မာကျမ်းစာအပေါ်သစ္စာရှိကြောင်း ၊ သမ္မာကျမ်းစာ အပေါ်သစ္စာရှိ တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်မှာအဆူအဆဲခံပြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိချင်ရှိမယ်Community မှာ အငြိုအငြင်ခံပြီးလာတဲ့သူလည်းရှိမယ်သမ္မာကျမ်းစာအတွက်ကြိုးစားကြတယ်၊
သမ္မာကျမ်းစာအတွက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူကြောင်း။Fr. Bosco ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပြီးသမ္မာကျမ်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းအတွက်ချန်ထားခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်တွေအများကြီးရှိတယ်Fr. George Shwe Htun အနေနဲ့အမွေခံပြီးဆက်လက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပြီးအများကြီးလည်းတိုးတက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဂျွန်မန်းဆိန်းဟီအမှာစကားပုသိမ်သာသနာအနေနဲ့ သမ္မာကျမ်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းအတွက်
ထဲထဲဝင်ဝင်တုံးတုံးတိုက်တိုက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ဆက်ကပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူတယ်၊Fr.မောရစ်ည ွန့်ဝေ နဲ့ Fr. Bosco တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ခုန Arch Bishop Athai ပြောသွားသလိုဘဲကိုယ့်သာသနာကို ပြန်ရောက် သွားတဲ့အခါသမ္မာကျမ်းစာလုပ်ငန််းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေအုံးမှာပါ။သမ္မာကျမ်းစာဟာ ကျွန်တော်တို့အ သက်ဖြစ်တယ်လောက မှာအိုမယ်၊နာမယ် ၊သေမယ်မေ သဆေးဆိုတာ မရှိဘူး ကျွန်တော်တို့ မှာဘာလိုသလဲ၊ခွန်အားဘဲလိုတယ်ခံနိုင်ရည်ကျေးဇူးတော်၊ အလင်းကျေးဇူးတော်လိုတယ်
1. Eucharist ကိုယ်တော်မြတ်စက္ကရမင်တူး
2. Bible သမ္မာကျမ်းစာ
3. Holy Spirit သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်